Habka sawirka qof walba: halkan waxaa ah 4 barnaamij oo matalaya iphone 7 oo lagu daray 'muuqaal gaar ah
Ugu Weyn Ee Wararka & Dib U Eegista Habka Sawirka ee qof walba: halkan waxaa ah 4 barnaamij oo isku ekaysiinaya muuqaal gaar ah iPhone 7 Plus
Habka Sawirka ee qof walba: halkan waxaa ah 4 barnaamij oo isku ekaysiinaya muuqaal gaar ah iPhone 7 Plus
Habka Sawirka - eeygaaga u eg mid dhab ah oo qabow sida
Marka, kamaradda labaad ee iPhone 7 Plus waa bahal xiiso leh. Si ka duwan labada kamaradood ee kamaradaha ah ee aan horay u aragnay taleefannada, xalka Apple & apos; wuxuu kaliya isticmaalaa kaamirada labaad munaasabado dhif ah - markaad dhaweyd 2x ee hore (iftiinkuna wuu fiican yahay), ama markaad dhaqaajiso Moodada Sawirka cusub.
Marka la soo koobo, qaabka aan soo sheegnay waa inuu kuu oggolaadaa inaad si fiican uga go'doomiso mawduucaaga, adigoo labadaba u adeegsanaya muraayadda 'telephoto lens' zoom optical iyo inaad ku dabaqdo a software qancin kara asalka. Ma ahan wax qumman weli, laakiin waa inaan dhahno - xitaa beta, Qaabka sawirku wuxuu awood u leeyahay inuu qaado xoogaa tallaallo aad u qurux badan markaad hesho goobta saxda ah, iftiinka, iyo qaddarka nasiibka ah.
Laakiin halkan ayaanu u jihaysanaynaa. Marka, intaad haysatid 2x optical optical iyo qaabka cusub ee loo yaqaan 'Portrait Mode' ee taleefankaaga waa hubaal, ma dhihi lahayn & apos; ma dhihi karno in dadka halkaa la dhigo ay ka heli doonaan muraayadaha telephoto inay ku filnaadaan sabab ay ku iibsadaan iPhone 7 Plus. Taasi waxay tiri, waa wax la fahmi karo haddii aad mararka qaar dareento xoogaa hinaase ah wanaagga bokeh ee taleefanka uu bixin karo oo aad jeclaan lahayd inaad ku sameyso taleefanka gacanta. Hagaag, dabiici ahaan, horumariyeyaasha barnaamijku horay ayey uga shaqeynayeen taas!
Dukaammada app-ka waxaa ka buuxa barnaamijyo ballan qaadaya cilladda, bokeh, & ldquo; saamaynta aperture & rdquo ;, ama sikastoo kale ay erey u sheegaan, laakiin in yar oo iyaga ka mid ah ayaa ugu yaraan ugu dhow inay wanaagsanaadaan. Waxaan qaadanay saacado raadinta kuwa saxda ah waxaanan kaluumeysanay 4 barnaamij oo runtii la isticmaali karo lana sameeyo waxa looga baahan yahay. Yup, ma aanan kari karin xitaa 5.
Fiiro gaar ah: kaliya talo deg deg ah si aad u qaadatid sawirada sawirka. Maaddaama inta badan taleefannada casriga ahi ay isticmaalaan kamarad xagal ballaadhan, waxaa fiican in la isticmaalo zoom dijitaalka ah ee taleefanka & apos; si loo soo saaro geesaha qalloocan ee sawirka loona soo dhoweeyo mawduucaaga. Waxaan jecel nahay inaan tagno ilaa 2x, laakiin waad ku tijaabin kartaa. Haa, waxaad waayi doontaa xoogaa tayo ah, laakiin muuqaalka soo baxay ayaa sifiican ufiicnaan doona. Iyo haa, tani waa kiiska kaliya ee aan waligeen kugula talin lahayn adeegsiga zoomka dhijitaalka ah.
Barnaamijyada ku siinaya Moodada Sawirka taleefan kasta
galaxy s7 gees vs htc 10
Abka Telefoonka Google si aad u hesho ogeysiiska Aqoonsiga Soo wacaha iyo dhowr astaamo cusub dhowaan
Asus ZenPad S 8.0 Z580CA Dib u eegis
Samsung Galaxy Note 4 wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 6.0.1 Marshmallow ee US Cellular
Android 7.1.1 Nougat wuxuu bilaabaa inuu u wareego Moto G4 Play ka dib dib udhac 6 bilood ah
PSA: Weli waad isticmaali kartaa Facebook Messenger adigoon lahayn astaan ​​Facebook ah
Sida loo xidido Samsung Galaxy Note5 (SM-N920T & N920P) oo loo rakibo soo kabashada gaarka ah
Sida loo demiyo Warbixinta Flipboard ee Samsung Galaxy S6 / edge
Milkiilayaasha Moto Z2 Force ee T-Mobile, AT&T iyo Sprint ayaa loo sheegay 'Pie No for you!'
Otterbox Symmetry Series kiiska loogu talagalay HTC One M8 Review